Hubi in ammaanka ee alaabta iyo shaqaalaha - Shiinaha Kingswel Makiinado
Hubi in ammaanka ee alaabta iyo shaqaalaha
Tan iyo corona cusub ee ka oogan Shiinaha, ilaa wasaaradaha dawlada, hoos si dadka caadiga ah, waxaan Kingswel Makiinado ee gobolka oo dhan ku socdaa nolosha, dhammaan heerarka unugyada si firfircoon talaabo inay sameeyaan shaqo wanaagsan ka hortagga cudurka faafa iyo shaqo gacanta ah.
Inkastoo our warshad ma aha ee degaanka xudunta - Wuhan, laakiin waxaan weli khafiif ah ma qaataan, markii ugu horeysay ee ay u dhaqmaan. On January 27, si deg deg ah aan qotomiyey koox ka hortagga xaaladaha degdegga ah hoggaanka iyo KOOXDA KAJAWAABIDDA XAALADDA DEGDEGGA, ka dibna shaqo warshad ka hortagga cudurka faafa iyo wax ku ool ah mid shaqaysa. Waxaan isla markiiba la sii daayay Digtoonidiinna Duulana for dillaacay on our website-ka, kooxda QQ, koox WeChat, Account WeChat rasmiga ah, iyo shirkadda madal siyaasadeed news. In markii ugu horeysay ee aan la sii daayay ka hortagga pneumonia ku corona sheeko iyo dib aqoonta shaqada la xiriira, Salaan xaalad jireed qof kasta kala dillaacay oo ku jira samee. Maalin gudahood, waxaan dhammeystirtay tirakoobka shaqaalaha, kuwaas oo ka tagay ay magaaladiisa inta lagu guda jiro fasaxa Spring Festival.
Ilaa hadda, mid ka mid ahaa shaqaalaha out-of-xafiiska Hubisay helay hal kiis oo ah bukaan qandho iyo qufac. Ka dibna, waxaan sidoo kale si adag raaci doonaa shuruudaha wasaaradaha dawlada iyo kooxaha ka hortagga cudurka faafa inay dib u eegaan soo laabashada shaqaalaha si loo hubiyo in ka-hortagga iyo xakameynta meel.
Our warshad iibsaday tiro badan oo waji caafimaad, oo jeermiska dila, heerkulka qiyaasta infrared, iwm, oo ku soo bilowday Dufcaddii ugu horeysa ee shaqaalaha warshad kormeerka iyo shaqada jirrabaya, halka kele oo dhan-wareega laba jeer maalintii on saarka iyo horumarinta waaxaha iyo xafiisyada warshad .
In kasta oo aan lahayn calaamadaha cudurka dillaacay helay in our warshad, weli waxaan ka hortagga wareegsan oo dhan-oo ay gacanta, si loo xaqiijiyo ammaanka ee alaabta our, si loo xaqiijiyo badbaadada shaqaalaha.
Sida laga soo xigtay warbixin dadweynaha WHO ee, baakadaha ka soo Shiinaha mana aha kuwo xambaari fayraska. dillaacay Tani ma saamayn doonto dhoofinta badeecadaha gudba xuduudaha, si aad u waa la mid aad u xaqiijin karaa in ay ka soo Shiinaha helaan wax soo saarka ugu fiican, waxayna sii wadi doontaa si ay kuu siiyaan adeegga tayada ugu fiican ee iibka kadib.
Ugu dambeyntii, waxaan jeclaan lahaa inaan mahad macaamiisha iyo saaxiibada had iyo jeer, kuwaas oo la daryeelo oo nagu saabsan arrimaha dibadda. Ka dib markii uu dillaacay, macaamiisha badan oo jirka ah noo soo xiriir ee markii ugu horeysay, wax weyddii iyo daryeel ku saabsan xaaladda hadda. Halkan, shaqaalaha Kingswel Makiinado dhan jeclaan lahaa in uu muujiyo in aad noo mahad ugu daacad ah!
waqti Post: Feb-28-2020